Kicinta iyo Dhismihii Bulshadii Kacaanka Soomaaliyeed | Somali President Jaalle Maxamed Siyaad Barre
You are here: Home Taariikh Kicinta iyo Dhismihii Bulshadii Kacaanka Soomaaliyeed
Kicinta iyo Dhismihii Bulshadii Kacaanka Soomaaliyeed
Kacaankii 21kii Oktoobaar intii uu dalka ka curtay si weyn ayuu u daryeelay isku dubbaridka bulshada. Waxaana arrintaas looga dan leeyahay in bulshada Soomaaliyeed ay qayb libaax ka qaatayn dhismaha lagu horumarinayey dadka, ayagoo niyad saafi ah ku dhaqmayey. Bulshadu waxay ka kooban tahay guutooyin kale geddisan oo mid walba ay dhinac ugaga jirto dhismaha mujtamaca ay ku wada nool yihiin. Guutooyinkaas bulshada waxaa ka mid ah:-
Shaqaalaha, Beeraleyda, Ardayda, Hooyooyinka, Guulwadayaasha, iyo kuwa kale. Guutooyinkaas waxaa mid walba loo sameeyey urur u gaar ah si hawlahooda lagu maamulo, looguna diyaariyo dhismaha dalka ka socdoy.� Waxaa kale oo guutooyinkaas loogu sameeyey ururradaas, in danahooda guud ahaan lagu daryeelo, aqoontooda guudna sare loogu qaado.
Kacaankii Somaaliyeed guulaha uu gaaray waxaa ka mid ah inu tirtirayo dabaqadihii kale sarreyey ee mujtamacu ka dhisnaa waqtigii hore. Wuxuu kale uu baabi'iyey quurshadii, iyo erayadii xunxumaa ee dadka shaqooyinka kale duwan haya lagu kale socci jirey, ujeeddada weynina waxay tahay in la wado shaqaysto.
Waxaa la dhisay intii Kacaanku jirey xarummo lagu carbinaayo bulshada. Waxaa kale oo meel walba laga furay tababarro iyo hanuunis ballaaran oo lagu barbaarinaayo bulshada.
Jaalle Siyaad wuxuu yiri:
Dhallinyaradu waa in ay ka qayb galaan dhaqaalaha, siyaasadda, tacliinta iyo caafimaadka dadka ilaalintiisa, waa in ay la dagaallamaan cadawga dalka dibedda iyo gudahaba kaga yimaadda
written by maryan , December 09, 2011
marka hore waan ?na salaamayaa waxaan ?na leeyahay waad waanagsant?h??n maadaama aad ?tus teen waxa uu ahaa ab?h?? kacnka soomaal?yeed allaha unaxar??sto waxaan aad uga murugaysanahay maanta s?dan nahay ?yo s?d?? aan ahayn mar hore wana wax ?llaahay qadaray marka wxaan ?nag? ?nagu boor?nayaa ?naad kashaqaysaan ?sku keen?da soomaal? wayn ?laahay ha ?nala garabgalo waan ?d??n ducay nayaa
Tiranyo iyo murug
written by Warfaa , February 06, 2012
Waan idin salamay dhalinyarada isku xilqamay inay waxqabadkii umada soomaaliyeed ay mujisay taasina waxay cadayn u tahay kartida umadena kujirto waxase kaxumahay in aanan arag dhalinyaro isu xilqantay wax uqabashada dalkooda kii kufakarana wuxu kuqancaa in aan waxba laga qaban karin.waxan dhaman dhalinyarada ka codsana in ay fakarkoda wax ka badalan
written by Tajiri aden shurie , September 06, 2012
Asc kadib mansha allah hadadan xalada an ku jirno aya xalad qarar ah waxana inaga tawar ah alla bari kaliya allahayow wadankena hooyo nawad inaga yeel amiiin amiin amin
written by a/fatah , April 21, 2013
marka hore waan idin salaamayaa marlabaad waxaan leeyahay siyaad waxa uu ahaa nin dhisay bulshada waana nin fiican
horay haloo socdo
written by hasan wsdsni , July 15, 2014
Waxaan marwalba aan jeclahay in aan dadkayga somaliyed waxaa la yiri waqyigaada waxaa u gu wanaagsan kan hada aad haysayid aan iska dayno calaacalka aan iska dayno. Ee dad aqoon dadnomo iyo islamo iyo somali ilaa haynaga dhigay waxa aanahay aan adunka tusno in aan nahay dad adkaysibadan oo wax kasta oo uu cadowgu rabay ay surta galin oo qarankii aan dib u soo noolayno waa bilahi towfiiq
written by yahye omar said , November 30, 2017
maasha allaaah walhi goortaan maqlo hadallada sayidka aad ayan uqiirodaa waayi wadanimadu waxad mooday ma,aha